Seychelles na-eweta anwụ na nrọ nke mgbapụ obi ụtọ na France
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Seychelles na-eweta anwụ na nrọ nke mgbapụ obi ụtọ na France
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Seychelles na-anabata ndị ọbịa si France
Ọhụụ na ụda nke Seychelles ejirila ike zuru oke were were were were mebie ahịa ndị France site na mgbasa ozi ọtụtụ ọwa nke Seychelles Tourism mere. Mgbasa ozi a, nke malitere na Septemba, na-ewe ọnwa anọ na-ebute mmiri iyi nke anwụ, ọnọdụ ndị pụtara ìhè na nrọ nke ikpo ọkụ nke oke osimiri agwaetiti India na-aga France ka isi mmalite njem nlegharị anya a na-abanye n'oge mgbụsị akwụkwọ na oyi.
Eburo ibuwanye na bulite aha ebe aga n'ahịa French, oru ngo a bụ akụkụ nke atụmatụ nkwurịta okwu sara mbara nke ga-eji usoro mgbasa ozi dị iche iche na-ezipụ ozi siri ike na Seychelles na-emeghe, na-anabata ndị ọbịa France anyị, Oriakụ Bernadette Willemin, Director General for Destination Marketing, na Tourism Seychelles kwuru.
"Anyị malitere mkpọsa ahụ na-arụ ọrụ na elu, tupu ịmalitegharị ụgbọ elu Air France na Seychelles, ebe ọ dị anyị mkpa ịhụ ebe anyị na-aga iji kpọọ ndị ọbịa France ka ha laghachi azụ n'àgwàetiti ahụ. Anyị maara etu njem siri sie ike n'oge a, site na mbọ anyị, anyị bu n'obi kpalie ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa ka ha họrọ Seychelles maka ezumike ọzọ ha ga-esi na mba ahụ, ọkachasị n'oge mgbụsị akwụkwọ-oyi a,” Oriakụ Willemin kwuru.
N'ọgwụgwụ Septemba na otu izu, ihe karịrị ndị njem 38,530,342 enweelarị ike ịchọpụta ebe ndị ama ama nke agwaetiti La Digue, n'ihi bọọdụ 1,200 na nyiwe ọdụ ụgbọ oloko 1200 nke Paris, ala ịta ahịhịa ya na ógbè ya.
Mgbanwe mgbanwe dịka nke Septemba 20 ruo Ọktoba 19, 2021, mkpọsa ahụ gara na Europe 1 Radio - otu n'ime ụlọ ọrụ redio ise kacha elu na France nke na-agbasakwa na mpaghara a na-asụ French na Belgium na Switzerland - site na mgbasa ozi nke ihe dị ka 42. ntụpọ na-agba ọsọ n'ime izu anọ ma na-ezubere ndị na-ege ntị nde 12. Ebe ndị a na-agbasa n'oge mbụ, kwere ka Seychelles nwekwuo ọhụhụ ya dị ka ebe a na-enweta ngwa ngwa ebe mmadụ nwere ike ịga njem nwayọ n'agbanyeghị ọrịa a.
N'ahapụghị okwute ọ bụla, ndị otu Seychelles Tourism wee were ndị na-ekiri BFT TV were mgbasa ozi nke nkeji nkeji iri abụọ na-agba kwa ụbọchị maka abalị abụọ site na Nọvemba 20-1. Akụkụ mgbasa ozi a bụ iji kpughee Seychelles na ịma mma ya niile maka ndị na-ekiri ha ịchọpụta ma ọ bụ rọrọ nrọ banyere ya, yana ngụkọta nke ntụpọ 14 na-ezubere ihe dị ka nde kọntaktị nde 70 gbara afọ 21.2 gbagoro.
"N'ịbụ onye kụrụ ike maka ọnwa abụọ mbụ nke mkpọsa ahụ, anyị nwere obi ike na mbọ anyị eruola ihe mgbaru ọsọ ya nke ịbawanye mmata banyere ebe a na-aga, anyị na-atụkwa anya mmụba nke ahịa na ntinye akwụkwọ maka oge ezumike," ka Oriakụ kwuru. Willemin.
Ọ gara n'ihu dụọ ọdụ na mkpọsa ugbu a agbanweela nlebara anya iji bulie n'iji usoro dijitalụ na ọtụtụ akụkọ dị na akwụkwọ akụkọ; mkpọsa ahụ weere ụzọ ọ bụla iji gwa onye njem ọ bụla kpọmkwem, ndị na-achọ ịchọpụta ebe ọhụrụ na niche ndị ọzọ akọwapụtara, dị ka ụmụ oke, agbamakwụkwọ ma ọ bụ mmiri mmiri.
A na-atụ anya ọtụtụ akụkọ telivishọn n'ime izu ndị na-abịa, ọkachasị na ọwa TF1, Arte na TV5 Monde iji gosipụta ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme nke Seychelles, gastronomy yana nchekwa obodo na gburugburu ya.
Site na mgbasa ozi a buru ibu, agwaetiti Seychelles na-achọ ikpughe ọ bụghị naanị ịma mma ya pụtara ìhè kamakwa eziokwu ya, ụdị dị iche iche nke ihe nketa okike na nke ọdịbendị na, ọ dịghị ihe ọzọ, nnabata na-ekpo ọkụ nke ndị bi na ya.
Seychelles anabatala ndị ọbịa 152,345 kemgbe mmalite nke 2021 gụnyere ndị ọbịa France 14,652, nke debere France dị ka ahịa njem nlegharị anya nke anọ na-eduga. Kemgbe mbata nke Air France na o, France edugala ndị ọbịa kwa izu na Seychelles maka izu anọ gara aga.
Ihe ntinye chọrọ na usoro ahụike yana ndepụta niile emelitere nke ndị ọrụ nyere ikike ugbu a na saịtị dị na Weebụsaịtị nke Ministry of Tourism.